China Translucent Film Light Box ifektri abakhiqizi | Lima
Qaphela: Umshayeli we-LED uyadingeka ukusebenzisa lezi zinombolo zendlu futhi akafakiwe ekuthengeni.
Imvelo Yesicelo: Ihhotela elingaphandle, isibhedlela, isitolo esidayisa izinto ezidayiswayo, inxanxathela yezitolo, isiteshi semetro, igalaji likaphethiloli, ipaki yokuzijabulisa nezindawo zomphakathi ezahlukahlukene.
Izincwadi ze-3D LED zasemuva
Heavy-Duty 304 Insimbi Engagqwali
Isikhathi sempilo se-LED: Amahora angu-36,000
Ukuphakama Kwenombolo: 8 ”
Idinga i-DC 12V 4-6W LED Driver (Akufakiwe)
Kufaka i-Mounting Hardware
Ukubuyela emuva kuqeda
Izincwadi zethu ze-Backlit zingenziwa ngezinto ezahlukahlukene zensimbi engagqwali ne-titanium. Okudume kakhulu yi-Brushed Stainless Steel noma i-Painted, kepha sinezinhlobonhlobo zokuqedwa okuhlukile okufana ne-Polished Brass, Copper, ne-Oxidized finishes.
I-Backlit Paint iqeda
Futhi singapenda izinhlamvu zethu zangemuva ngemibala ehlukahlukene. Sinemibala kapende ejwayelekile engama-37 kodwa futhi singafanisa umbala noma imuphi umbala kusuka kumikhiqizo emikhulu yepende efana nePantone, uSherwin Williams, uBenjamin Moore, noBehr. Imidwebo yethu i-Baked Enamel futhi ihlala isikhathi eside ngokweqile. Ziza newaranti yempilo yonke yokusetshenziswa kwangaphakathi nangaphandle ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngokuxebuka, ukufiphala noma ukugawulwa.
Uhlobo lomkhiqizo: Izincwadi ze-LED zangemuva
Izinto: Insimbi engenasici / i-LED
Umthombo wokukhanya: DC12V
Idizayini: Yamukela ukwenza ngokwezifiso, okuqukethwe okuhlukahlukene, ubujamo, osayizi bokukhetha kwakho
Izitayela ze-Backlit Lighting
Sinikeza izinketho ezipholile ngempela ze-Back Lighting. Ukukhanya kwangemuva kwendabuko kuyisicelo esivame kakhulu - incwadi imile odongeni. Ukukhanya kwangemuva kwe-Acrylic kuhle kakhulu, kungaba yi-acrylic efriziwe noma ecacile ngemuva kwezinhlamvu noma ilogo futhi ingeza enye into ethi "Wow" kuphrojekthi yakho.
Izimpawu Zangemuva Lit
Isitayela se-Backlit Lighting esijwayelekile esivela odongeni ebusweni 1 ″ - 2 ″. Lokhu kuvumela umphumela wokukhanyisa we-Halo Lit wakudala
Izimpawu ze-Edge Lit
Amaphrojekthi we-Acrylic Backer ngemuva enza umphumela wokukhanya okhanyisiwe futhi oqondile. Ilungele izikhala zangaphakathi nemibukiso yezohwebo.
I-Acrylic ingenziwa ngezifiso ngezindlela eziningi. Ipeyinti yangokwezifiso, ifakwe kuphaneli, noma i-acrylic egqinsiwe ngokubukeka okupholile okungu-3-D - konke lokhu kuyizinketho ezinhle zokunikeza izimpawu zakho i-pop eyengeziwe!
Ungazifaka Kanjani Izimpawu ze-Backlit
Izinhlamvu zethu zezimpawu ze-Back Lit namalogo kulula ukufakwa. Sincoma ukuba nogesi onamalayisense noma isifaki sezimpawu uqinisekise ukuthi izidingo zakho zamandla ziyahlangatshezwa zonke. (okujwayelekile okuyi-volt eyi-110 isebenza kuma-transformer ethu abhalwe ku-UL). Sinikezela konke okudingekayo ukuze kufakwe kalula.
Idizayini Nesilinganiso Yamukela ukwenziwa ngokwezifiso, imibala ehlukahlukene yokudweba, ubujamo, amasayizi atholakalayo.Kungangcono usinikeze umdwebo wokuklama.Yebo uma kungenjalo singanikeza insizakalo yokwakhiwa kobuchwepheshe.
Ukupakisha Ngaphakathi kunepulasitiki negwebu, ngaphandle kupakisha izinkuni; ngaphandle kwezinkuni ngomshubhu wensimbi.
Langaphambilini Reflective Self Yesigcilikisha Vinyl isikhangiso
Olandelayo: I-Translucent Film Light Box Isithombe
uphawu lwensimbi engagqwali